ဗြိတိန်နိုင်ငံက စိတ်ရောဂါ အထူးကဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမောင်ဥက္ကာ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေး မထိခိုက်အောင် တယောက်နဲ့တယောက် အားပေးနေဖို့နဲ့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက စိတ်ရောဂါ အထူးကဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမောင်ဥက္ကာက အကြံပေးပါတယ်။ စိတ်ပူပန်တဲ့ရောဂါ၊ စိတ်ဖိစည်းတဲ့ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာကို မစုမြတ်မွန်က အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာမောင်ဥက္ကာကို မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ မင်္ဂလာပါ ဒေါက်တာမောင်ဥက္ကာ။ အခု မြန်မာပြည်မှာ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ လူတွေက တော်တော်လေး စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်မှုတွေ မခံမရပ်ဖြစ်တာတွေ တော်တော်လေး ခံစားရတယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအနှံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ခံစားမှုတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်တယ်လို့ ဆရာတို့လို စိတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ပါလဲ။ အဲဒါကို အရင်ဆုံးဖြေပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ မင်္ဂလာပါ မစုမြတ်မွန်။ ကျေးဇူးပါ။ ဒီမေးခွန်းကို မဖြေခင် ကျနော် အနောက်ကလေးကို နည်းနည်းလေး ပြန်ပြီးတော့ သွားလိုက်ချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီဟာက တနိုင်ငံလုံးနဲ့ နိုင်ငံတဝှမ်း ပြည်လုံးကျွတ်အထွေထွေသပိတ်နဲ့ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ ဒီ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လားဆိုတော့ ကျနော်လည်း စိတ်ရောဂါဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက် လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၂၅၀) လောက်က ဒီလိုမျိုး Protest, Demonstration, Revolution, Campaign တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အမြဲတမ်း လုပ်ကြတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၉၉% ကလည်း ဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိတယ်ဆိုတာကို မှတ်တမ်းတွေ ရှိတယ်။
ဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေရဲ့  စိတ်ရောဂါအခြေအနေပေါ်မှာ Impact ဘယ်လိုမျိုး ရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာကို လေ့လာထားတဲ့ဟာက တော်တော်လေးနည်းတယ်။ အားနည်းတာကို တွေ့ရတယ်။ နည်းပေမယ့် တချို့ စာတမ်းတွေမှာ အဓိကတော့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။ မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ရောက်လာတယ်။ ဘာကိုထိခိုက်နိုင်သလသဲဆိုတော့ (၁) စိတ်ကျရောဂါ - depression (၂) စိတ်ပူပန်တတ်တဲ့ရောဂါ - anxiety (၃) ဒဏ်ရာဟောင်းကို ပြန်ပြီးတော့ သတိရတတ်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ - Post-traumatic stress disorder (PTSD). အဲဒါမျိုးတွေ ခံစားကြရတာကို လေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။
အဲဒီတော့ စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ပူပန်တဲ့ရောဂါ၊ PTSD တို့ ဒါတွေက အခုဖြစ်လာဆိုတော့ အခု မဖြစ်ပါဘူး။ အခုလူတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူလူထု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာက စိတ်ဖိစီးမှုကတော့ တကယ့်ကို ကြုံတွေ့နေရတယ်။ နောက် emotional roller-coaster စိတ်ကအနိမ့်အမြင့်တွေ အများကြီးဖြစ်တယ်။ ဝမ်းသာတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဝမ်းနည်းတာတွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒါကို စိတ်ရောဂါလို့ ပြောမလားဆိုတော့ ကျနော်တို့က မပြောပါဘူး။ ဒါက ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့၊ Normal Stress Reaction ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ရဲ့  ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုပါ။ ဒါက စိတ်ရောဂါ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ ရောက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး - ကိုယ်ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်တယ်လို့ ဆရာတို့ ပြောလို့ရပါသလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ လူတွေက စိတ်ဓါတ်ကျသွားမယ်။ ဘာမှ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။ အရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ဖို့ အချက်က ပိုပြီးတော့ များသွားမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ စိတ်ဓါတ်မကျဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်။ အဲဒီအတွက်ဆိုရင်တော့ ကျနော်က အချက် (၃) ချက် ပြောချင်တယ်။ အခုန ကျနော်လေ့လာကြည့်တဲ့ စာတမ်းတွေမှာ သူက Mental Health ကို Impact မဖြစ်အောင် စိတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ အခုနပြောတဲ့ ရောဂါမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကုထုံးက United ဖြစ်ရမယ်။ Connected ဖြစ်ရမယ်။ အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ Cause တစ်ခုကို တိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်တော့မှ စိတ်ရောဂါ ဖြစ်တဲ့၊ စိတ်ဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အဓိက ကုထုံးက ဆက်လက်ပြီးတော့ စည်းလုံးရမယ်။ စည်းလုံးတဲ့အပြင် နောက်တစ်ခု စာတမ်းမှာ တွေ့ထားတာက Connected ဖြစ်ရမယ်။ အားလုံးသည် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်ပြီးတော့ အားပေးနေရမယ်။
နောက်ပြီးတော့ Motivated ဖြစ်ရမယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို သွားတဲ့အခါမှာ ငါတို့ အောင်မြင်ရင် ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးနဲ့ ကိုယ်က ငယ်ငယ်တုန်းက ကျိုက်ထီးရိုး တက်သလိုပေါ့။ တစ်ကွေ့ရောက်ရင် ရောက်တော့မယ်၊ နောက်တစ်ကွေ့ရောက်ရင် ရောက်တော့မယ် - ရောက်ချင်မှာတော့ ရောက်အုံးမယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုမျိုး အားပေးရင်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကြီးလည်း ဖူးလိုက်ရအောင်ဆိုပြီး ကျန်တဲ့ Stress တွေ ပင်းပန်တာတွေ ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး စိတ်ကလေးနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Motivate ဖြစ်အောင်၊ အားပေးနေရမယ်။
ငါတို့တွေ အောင်သွားရင် ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာလုပ်မလဲ။ လူမှုရေးအတွက် ဘာလုပ်မလဲ၊ ပညာရေးအတွက် ဘာလုပ်မလဲ။ အမျိုးသားအားလုံးအတွက် ဘာလုပ်မလဲ။ ဒီဟာမျိုးတွေ စဉ်းစာုးထားရင် ဒါက Motivated ဖြစ်မယ်။ အဲဒီလို Motivated ဖြစ်နေရင် ဆက်ပြီးတော့ လမ်းဆက်လျှောက်နိုင်မယ်။ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး အတွက်ကို ပြောတာပါ။ ပြည်သူလူထုက ဒီလိုသာ လုပ်လို့ရှိရင် အခုနပြောတဲ့ စိတ်ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်း မဖြစ်လာနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကိုလဲ ကာကွယ်ပြီသား ဖြစ်သွားမှာပါ။
မေး ။ ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ ဆန္ဒပြနေကြတာကို ကြည့်လို့ရှိရင် များသောအားဖြင့်က လူငယ်တွေပါ။ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အသက် (၂၀) ဝန်းကျင် လူငယ်တွေလို့ အများစုတောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီလူငယ်တွေက နေ့တိုင်း လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့ ဆန္ဒပြနေတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့မျက်စိရှေ့ မှာပဲ အခုဆိုရင် အင်အားသုံးပြီးတော့ ဖြိုခွဲခံရတာတွေ တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ အဲဒီလို လူငယ်တွေရဲ့  စိတ်ထဲမှာ ဒီလိုမျိုး မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမျိုး စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆရာပြောလို့ရလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါလဲareally good question အလွန်ကောင်းတဲံ မေးခွန်းပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီ riot ကို နှိမ်းနင်းတယ်၊ revolution တွေကို နှိမ်းနင်းတယ်ဆိုတာ အရင်တုန်းကလဲ တွေ့မှာပါ။ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲ ဒီလိုမျိုး နှိမ်နင်းခဲ့တာတွေ ကျနော်တို့အားလုံး တွေ့ဖူးကြပါတယ်။ ဒီမှာဆိုလဲ ကျနော်တို့ကို ပြည်သူလူထုထဲကို Fear Factor ကြောက်စိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကြောက်စိတ်ဝင်သွားအောင်လို့ သေနတ်တွေဖောက်တယ်။ ခေါင်းတည့်တည့်ကို ပစ်တယ်။ ဘာမှပြန်လည်မခုခံတဲ့ လူငယ်လေးတွေကို မတရာုးရိုက်နှက်တယ်။ အိမ်တွေကို မတရားဝင်ဖျက်တယ်။ မင်းမဲ့စရိုက်တွေ လုပ်နေတဲ့ဟာတွေက လူတွေကို ကြောက်စိတ်ဝင်အောင် လုပ်နေတာ။ အဲဒီတော့ သူတို့တွေက ကျနော်ပြောသလိုမျိုးပဲ အခုန (၃) ချက်ကိုပဲ ပြန်သွားမယ်။ United, Connected, Motivated ဖြစ်နေရင် ဒီဟာတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်။
တကယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု တင်းကြပ်နေတယ်။ ငိုချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာမယ်။ ညဘက်အိပ်မရဘူး။ မနက်ဖြန်ကျရင် ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ။ ဘယ်တယောက်က ကျိုးမလဲ၊ ဘယ်တယောက်ကို ရိုက်မလဲ။ ဒီလိုမျိုး စိတ်လေးတွေ ပေါ်လာရင် အချင်းချင်း စကားပြောပါ။ အချင်းချင်းအားပေးစကားပြောပါ။ ဒါက လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြတဲ့ လူငယ်တွေ။
ကျနော်တို့အားလုံးမှာ လောလောဆယ်တော့ အဖြေဘယ်တော့ ရမလဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ ဒီလိုမျိုး အားပေးနေရင်နဲ့ အားတတ်နေရင် Motivated ဖြစ်နေရင် ငါတို့ အောင်သွားရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အောင်စိတ်လေးနဲ့ သူတို့ ရှာဖွေပြီးတော့ ဖတ်မယ်၊ ပြုမယ်ဆိုရင် ဒီအကြောင်းတွေ ခေါင်းထဲမှာ တချိန်လုံး ရောက်မနေတော့ဘူး။ နောင် ငါတို့ရရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာ အတွေးက ခေါင်းထဲမှာ ဝင်နေရင် အဲဒီအတွေးလေးနဲ့ အဲဒီမှာ occupy ဖြစ်နေရင် စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အနိဋ္ဌာရုံတွေကိုပဲ အမြဲတမ်း တွေးမနေဘဲနဲ့ ငါတို့ပြီးသွားရင် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ နည်းနည်းလေး switch လုပ်ရမယ်။ အဲဒါမျိုးလုပ်ရင် သူတို့က ပိုပြီးတော့ resilient စိတ်ခွန်အား ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာမယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးက ပိုပြီးအားပြည့်လာမယ်။ အဲဒါ အရေးကြီးပါတယ်။
မေး ။ ။ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြည်တွင်းမှာတင် မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတကာမှာ ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာတွေကလည်း တချိန်လုံး စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ စိတ်ပူပန်ကြတယ်။ စိတ်သောက ရောက်ကြတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး စိုးရိမ်မှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေပျောက်သွားအောင်၊ လျော့ကျသွားအောင် ဆရာအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး အကြံပြုချင်ပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါက another good question ပါ။ အဲဒါက ဗမာပြည်တွင်းကော ပြည်ပပါ ပြည်တွင်းမှာရော ဘာနဲ့သွားတူသလဲဆိုတော့ အခုဟာက နည်းနည်းလေး Limitation ထားရမယ်။ တချို့  untrusted sources တွေ၊ တချို့ ပြောကြတဲ့ Psywar လာတဲ့ဟာတွေ၊ အဲဒါမျိုးတွေက ကိုယ့်ကိုယ် စိတ်ခြောက်ခြားအောင်၊ စိတ်ဓါတ်ပျက်ပြားအောင် ဟိုဘက်က လုပ်နေတာ။ လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကို မကြည့်နဲ့။ အခုနပြောတဲ့ Fear Factor ဝင်တဲ့ဟာတွေကို ဖြစ်သွားရင် လူတွေက မလိုလားအပ်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပိုများလာမယ်။ အဲဒါက နံပတ်တစ်။ နံပတ်နှစ်ကတော့ ပြည်ပမှာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အချိန်နဲ့ ပြည်ပအချိန်က Time Differences က အဲဒါက Main Factor အဓိကလို့ ကျနော်ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ညဆိုရင် ဗမာပြည်မှာက မနက်။ အကုန်လုံးက သိချင်တော့ ညမအိပ်ဘဲ ကြည့်ကြတယ်။ အားပေးကြတာ ပြည်သူလူထုကို ပြင်ပကနေ။ အားပေးကြတော့ နေ့နဲ့ညတွေ အကုန်မှားကုန်တယ်။ အဲဒါက တစ်ချက်။
နောက် အစားအသောက် ပျက်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားနေရတယ်။ စားသာစားနေရတယ် အရသာက မရှိဘူး။ မပျော်တဲ့စိတ်နဲ့ တာဝန်အရသာ တစ်ခုခု ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို လုပ်ပေးနေရတာ ဖြစ်နေတော့ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစိတ်နဲ့ လုပ်နေရတာ တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ပါ။ အဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ထောင်စိတ်ကြေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ အချိန်မှန်မှန်အိပ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ တတ်နိုင်သလောက် မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပါတယ်။ ကြိုးစားပါ။ ပြီးတော့ အစားအသောက်ကိုလည်း အချိန်မှန်မှန်လေး စားပါ။ ပြီးတော့ Connected လုပ်ပြီးတော့ မယုံရတဲ့ source တွေ၊ Psywar လုပ်နေတဲ့ Post တွေကို မဖတ်ပါနဲ့။ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပိုပြီးတော့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးတော့ ကြံ့ခိုင်အောင် လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မေး ။ ။ အခုလက်ရှိမှာ ဆရာလည်း စောစောက ပြောပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ သောကရောက်မှုတွေက အခုအခြေအနေမှာတော့ စိတ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အဆင့်ကို မရောက်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီအဆင့် ဒီအခြေအနေတွေက ပိုပြီးတော့ ကြာရှည်သွားမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း ထိခိုက်လာပြီဆိုရင် ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှု ယူဖို့အတွက်က ဘယ်လောက်အထိ အရေးကြီးလဲ။ ဒါကို ဘယ်လောက်အထိ ဂရုစိုက်လုပ်သင့်သလဲဆိုတာကို ဆရာအနေနဲ့ ပြောချင်ပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါကတော့ အရေးကြီးတယ်။ အဓိကဖြစ်မှာတော့ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ စိတ်ပူပန်မှုရောဂါ။ တချိန်လုံး ပူပန်နေပြီးတော့ တစ်ခုခု မလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင်တာတွေ ဖြစ်မယ်။ ဘာမှ အဓိက concentration ဘယ်အရာကိုမှ အာရုံစူးစိုက်လို့ မရဘူး။ ဘာလုပ်လုပ် မပျော်ဘူး။ ပျော်တဲ့စိတ်လည်း မရှိတော့ဘူး။ ဘာမှလဲ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်လည်း မရှိတော့ဘူး။ စားချင်စိတ်လည်း မရှိ၊ အိပ်ချင်စိတ်လည်း မရှိ။ အိပ်လည်းမပျော်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒါက စိတ်ကျန်းမားရေးအတွက် တိုင်ပင်သင့်ပြီ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ စကားပြောသင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာက ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့လူမှာ နှစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့စိတ်။
ကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်တယ်။ နေမကောင်းရင် ဆရာဝန်ပြတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးလည်း ဒီအတိုင်းပဲ အခုန ကျနော်ပြောတဲ့ လက္ခဏာလေးတွေ ရှိလာရင် ဆရာဝန်ကို ပြပါ။ ပြောပါ။ ဒါက ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရောဂါဖြစ်ရင်လဲ ငါတော့ စိတ်ဒီလိုလေး ဖြစ်နေတယ်။ ဘေးနားက ပတ်ဝန်းကျင် ပိုပြီးတော့ ပံ့ပိုးပေးလို့ရမယ်။ စကားတွေ ပြောပေးလို့ရတယ်။ ဂရုစိုက်ပေးလို့ရတယ်။ ဒါဆိုရင် စိတ်ရောဂါက ပြန်ပြီးတော့ ကောင်းလာမယ်။ စိတ်ရောဂါက ဆေးတစ်ခုတည်းသောက်လို့ ပျောက်တဲ့ရောဂါ မဟုတ်ဘူး။ သူက ဆေးလည်းသောက်ရမယ်။ စိတ်ဓါတ်ဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်ဖို့လည်း လုပ်ရမယ်။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင် Social ကလည်း Support လည်း လိုတယ်။ ဒီသုံးခုပေါင်းမှ သုံးကြောင်းထောက်လိုက်မှ စိတ်ရောဂါက ပြန်ပြီးတော့ ထောင်တက်သွားမယ်။ အဲဒီတော့ မရှက်ပါနဲ့။ ဖြစ်လာရင် တစ်ယောက်ထဲ ကြိတ်ပြီးတော့ မခံပါနဲ့။ ကူညီမှုကို ရယူပါ။ ဘေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု။ သူငယ်ချင်း အသိုင်းအဝိုင်းကို ပြောပြီးတော့ ပံ့ပိုးမှုကို ရယူပါ။
မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင် မနောက်ပါနဲ့။ မပြောင်ပါနဲ့။ ဒါတွေက နောက်စရာ ပြောင်စရာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က တကယ့်ခံစားနေရတာဆိုတော့ အားပေးပါ။ Support လုပ်ပေးပါ။ ဒီလိုမျိုး လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် အခုန စိတ်ရောဂါကလည်း ပြန်ပြီးတော့ နောက်တဆင့် ပြန်ကောင်းသွားပြီးတော့ ပုံမှန်ပြည်သူလူထုထဲမှာ တတပ်တအား ပြန်ဖြစ်သွားမယ့်ဟာ ဖြစ်သွားမယ်။ ကျနော်ကတော့ အဲဒီလိုမျိုးပဲ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
မစုမြတ်မွန် ။ ။ အခုလိုမျိုး အချိန်ပေးပြီးတော့ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။
ဖြေ ။ ။ အခုလိုမျိုး ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ လကျရှိဖွဈနတေဲ့ အခွအေနတှေကွေောငျ့ စိတျကနျြးမာရေး မထိခိုကျအောငျ တယောကျနဲ့တယောကျ အားပေးနဖေို့နဲ့ အရေးကွီးတယျလို့ ဗွိတိနျနိုငျငံက စိတျရောဂါ အထူးကဆရာဝနျကွီး ဒေါကျတာမောငျဥက်ကာက အကွံပေးပါတယျ။ စိတျပူပနျတဲ့ရောဂါ၊ စိတျဖိစညျးတဲ့ရောဂါတှေ မဖွဈအောငျ ဘယျလိုကာကှယျနိုငျမလဲဆိုတာကို မစုမွတျမှနျက အထူးကုဆရာဝနျကွီး ဒေါကျတာမောငျဥက်ကာကို မေးမွနျးထားပါတယျ။
မေး ။ ။ မင်ျဂလာပါ ဒေါကျတာမောငျဥက်ကာ။ အခု မွနျမာပွညျမှာ အာဏာသိမျးပွီးတဲ့နောကျပိုငျးမှာ လူတှကေ တျောတျောလေး စိတျထဲမှာ မကနြေပျမှုတှေ မခံမရပျဖွဈတာတှေ တျောတျောလေး ခံစားရတယျဆိုတာ မွနျမာနိုငျငံအနှံမှာ ဖွဈနတေဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျ သိနိုငျပါတယျ။ အဲဒီစိတျခံစားမှုတှကေ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာ ရောကျတဲ့အခါမြိုးမှာ ကိုယျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျတယျလို့ ဆရာတို့လို စိတျပညာရှငျတှအေနနေဲ့ သတျမှတျပါလဲ။ အဲဒါကို အရငျဆုံးဖွပေေးပါ။
ဖွေ ။ ။ မင်ျဂလာပါ မစုမွတျမှနျ။ ကြေးဇူးပါ။ ဒီမေးခှနျးကို မဖွခေငျ ကနြျော အနောကျကလေးကို နညျးနညျးလေး ပွနျပွီးတော့ သှားလိုကျခငျြတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီဟာက တနိုငျငံလုံးနဲ့ နိုငျငံတဝှမျး ပွညျလုံးကြှတျအထှထှေသေပိတျနဲ့ ခတျေပွောငျးတျောလှနျရေး လုပျနတေယျဆိုရငျလဲ မမှားပါဘူး။ ဒီ စိတျကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျလားဆိုတော့ ကနြျောလညျး စိတျရောဂါဆရာဝနျဖွဈတဲ့အတှကျ လလေ့ာကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ ကမ်ဘာပျေါမှာ နိုငျငံတျောတျောမြားမြားနဲ့ နိုငျငံပေါငျး (၂၅၀) လောကျက ဒီလိုမြိုး Protest, Demonstration, Revolution, Campaign တဈခုမဟုတျ တဈခု အမွဲတမျး လုပျကွတယျ။ ကမ်ဘာ့လူဦးရေ ၉၉% ကလညျး ဒီလိုမြိုးတှေ လုပျဖူးတယျဆိုတဲ့ အတှအေ့ကွုံ ရှိတယျဆိုတာကို မှတျတမျးတှေ ရှိတယျ။
ဒီလိုလုပျတဲ့လူတှရေဲ့ စိတျရောဂါအခွအေနပေျေါမှာ Impact ဘယျလိုမြိုး ရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာကို လလေ့ာထားတဲ့ဟာက တျောတျောလေးနညျးတယျ။ အားနညျးတာကို တှရေ့တယျ။ နညျးပမေယျ့ တခြို့စာတမျးတှမှော အဓိကတော့ စိတျကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျနိုငျတယျ။ မေးတဲ့ မေးခှနျးကို ရောကျလာတယျ။ ဘာကိုထိခိုကျနိုငျသလသဲဆိုတော့ (၁) စိတျကရြောဂါ - depression (၂) စိတျပူပနျတတျတဲ့ရောဂါ - anxiety (၃) ဒဏျရာဟောငျးကို ပွနျပွီးတော့ သတိရတတျပွီး ဖွဈတတျတဲ့ စိတျဖိစီးမှုရောဂါ - Post-traumatic stress disorder (PTSD). အဲဒါမြိုးတှေ ခံစားကွရတာကို လလေ့ာတှရှေိ့ရတယျ။
အဲဒီတော့ စိတျကရြောဂါ၊ စိတျပူပနျတဲ့ရောဂါ၊ PTSD တို့ ဒါတှကေ အခုဖွဈလာဆိုတော့ အခု မဖွဈပါဘူး။ အခုလူတှေ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခုအခြိနျမှာ မွနျမာပွညျသူလူထု ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ဟာက စိတျဖိစီးမှုကတော့ တကယျ့ကို ကွုံတှနေ့ရေတယျ။ နောကျ emotional roller-coaster စိတျကအနိမျ့အမွငျ့တှေ အမြားကွီးဖွဈတယျ။ ဝမျးသာတာတှေ ဖွဈတယျ။ ဝမျးနညျးတာတှေ ဖွဈတယျ။ အဲဒီတော့ ဒါကို စိတျရောဂါလို့ ပွောမလားဆိုတော့ ကနြျောတို့က မပွောပါဘူး။ ဒါက ပုံမှနျဖွဈတဲ့၊ Normal Stress Reaction ပုံမှနျပတျဝနျးကငျြမှာ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲတှကွေောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ စိတျရဲ့ ပုံမှနျတုံ့ပွနျမှုပါ။ ဒါက စိတျရောဂါ မဟုတျပါဘူး။
မေး ။ ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါက ကနျြးမာရေးကို ဘယျလို အခွအေနမြေိုးမှာ ရောကျတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ရဲ့ကနျြးမာရေး - ကိုယျကနျြးမာရေး၊ စိတျကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျတယျလို့ ဆရာတို့ ပွောလို့ရပါသလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ လူတှကေ စိတျဓါတျကသြှားမယျ။ ဘာမှ လုပျခငျြကိုငျခငျြစိတျ မရှိတော့ဘူး။ အရှုံးပေးလိုကျမယျဆိုရငျတော့ စိတျကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျဖို့ အခကျြက ပိုပွီးတော့ မြားသှားမယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါတှကေို ကာကှယျဖို့ဆိုရငျတော့ စိတျဓါတျမကဖြို့ ပိုအရေးကွီးတယျ။ အဲဒီအတှကျဆိုရငျတော့ ကနြျောက အခကျြ (၃) ခကျြ ပွောခငျြတယျ။ အခုန ကနြျောလလေ့ာကွညျ့တဲ့ စာတမျးတှမှော သူက Mental Health ကို Impact မဖွဈအောငျ စိတျရောဂါဖွဈတဲ့ အခုနပွောတဲ့ ရောဂါမြိုးတှေ မဖွဈအောငျ အကောငျးဆုံး ကုထုံးက United ဖွဈရမယျ။ Connected ဖွဈရမယျ။ အားလုံးစညျးစညျးလုံးလုံးနဲ့ Cause တဈခုကို တိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဘယျတော့မှ စိတျရောဂါ ဖွဈတဲ့၊ စိတျဝဒေနာနဲ့ဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှေ မရနိုငျပါဘူး။ အဲဒီတော့ အဓိက ကုထုံးက ဆကျလကျပွီးတော့ စညျးလုံးရမယျ။ စညျးလုံးတဲ့အပွငျ နောကျတဈခု စာတမျးမှာ တှထေ့ားတာက Connected ဖွဈရမယျ။ အားလုံးသညျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အမွဲတမျး ဆကျသှယျပွီးတော့ အားပေးနရေမယျ။
နောကျပွီးတော့ Motivated ဖွဈရမယျ။ ဘာလဲဆိုတော့ ပနျးတိုငျတဈခုကို သှားတဲ့အခါမှာ ငါတို့ အောငျမွငျရငျ ဘာတှလေုပျမယျဆိုတဲ့ စိတျကလေးနဲ့ ကိုယျက ငယျငယျတုနျးက ကြိုကျထီးရိုး တကျသလိုပေါ့။ တဈကှရေ့ောကျရငျ ရောကျတော့မယျ၊ နောကျတဈကှရေ့ောကျရငျ ရောကျတော့မယျ - ရောကျခငျြမှာတော့ ရောကျအုံးမယျ၊ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလိုမြိုး အားပေးရငျနဲ့ နောကျဆုံးတော့ ကြိုကျထီးရိုးဘုရားကွီးလညျး ဖူးလိုကျရအောငျဆိုပွီး ကနျြတဲ့ Stress တှေ ပငျးပနျတာတှေ ပြောကျသှားတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး စိတျကလေးနဲ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ Motivate ဖွဈအောငျ၊ အားပေးနရေမယျ။
ငါတို့တှေ အောငျသှားရငျ ဘာတှလေုပျကွမလဲ။ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘာလုပျမလဲ။ လူမှုရေးအတှကျ ဘာလုပျမလဲ၊ ပညာရေးအတှကျ ဘာလုပျမလဲ။ အမြိုးသားအားလုံးအတှကျ ဘာလုပျမလဲ။ ဒီဟာမြိုးတှေ စဉျးစာုးထားရငျ ဒါက Motivated ဖွဈမယျ။ အဲဒီလို Motivated ဖွဈနရေငျ ဆကျပွီးတော့ လမျးဆကျလြှောကျနိုငျမယျ။ ပွညျသူလူထုတရပျလုံး အတှကျကို ပွောတာပါ။ ပွညျသူလူထုက ဒီလိုသာ လုပျလို့ရှိရငျ အခုနပွောတဲ့ စိတျရောဂါနဲ့ ပတျသကျတဲ့ စိတျသကျတဲ့ဟာတှလေညျး မဖွဈလာနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒါကိုလဲ ကာကှယျပွီသား ဖွဈသှားမှာပါ။
မေး ။ ။ အခု မွနျမာနိုငျငံမှာ နိုငျငံတဝှမျးမှာ ဆန်ဒပွနကွေတာကို ကွညျ့လို့ရှိရငျ မြားသောအားဖွငျ့က လူငယျတှပေါ။ ပွောမယျဆိုရငျတော့ အသကျ (၂၀) ဝနျးကငျြ လူငယျတှလေို့ အမြားစုတောငျ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီလူငယျတှကေ နတေို့ငျး လမျးမပျေါထှကျပွီးတော့ ဆန်ဒပွနတေယျ။ ပွီးတော့ သူတို့မကျြစိရှမှေ့ာပဲ အခုဆိုရငျ အငျအားသုံးပွီးတော့ ဖွိုခှဲခံရတာတှေ တှနေ့ရေတယျဆိုတော့ အဲဒီလို လူငယျတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ ဒီလိုမြိုး မွငျနတှေနေ့ရေတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့ သူတို့အနနေဲ့ သူတို့စိတျထဲမှာ ဘယျလိုမြိုး စိတျဒဏျရာတှေ ဖွဈသှားနိုငျတယျလို့ ဆရာပွောလို့ရလဲ။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါလဲareally good question အလှနျကောငျးတဲံ မေးခှနျးပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီ riot ကို နှိမျးနငျးတယျ၊ revolution တှကေို နှိမျးနငျးတယျဆိုတာ အရငျတုနျးကလဲ တှမှေ့ာပါ။ ထိုငျဝမျ၊ ဟောငျကောငျနဲ့ တခွားနိုငျငံတှမှောလဲ ဒီလိုမြိုး နှိမျနငျးခဲ့တာတှေ ကနြျောတို့အားလုံး တှဖေူ့းကွပါတယျ။ ဒီမှာဆိုလဲ ကနြျောတို့ကို ပွညျသူလူထုထဲကို Fear Factor ကွောကျစိတျဝငျသှားအောငျလို့ လုပျဆောငျနတေဲ့ အခကျြတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ကွောကျစိတျဝငျသှားအောငျလို့ သနေတျတှဖေောကျတယျ။ ခေါငျးတညျ့တညျ့ကို ပဈတယျ။ ဘာမှပွနျလညျမခုခံတဲ့ လူငယျလေးတှကေို မတရာုးရိုကျနှကျတယျ။ အိမျတှကေို မတရားဝငျဖကျြတယျ။ မငျးမဲ့စရိုကျတှေ လုပျနတေဲ့ဟာတှကေ လူတှကေို ကွောကျစိတျဝငျအောငျ လုပျနတော။ အဲဒီတော့ သူတို့တှကေ ကနြျောပွောသလိုမြိုးပဲ အခုန (၃) ခကျြကိုပဲ ပွနျသှားမယျ။ United, Connected, Motivated ဖွဈနရေငျ ဒီဟာတှကေို ကြျောဖွတျနိုငျတယျ။
တကယျလို့ စိတျထဲမှာ တဈခုခု တငျးကွပျနတေယျ။ ငိုခငျြစိတျတှေ ပျေါလာမယျ။ ညဘကျအိပျမရဘူး။ မနကျဖွနျကရြငျ ဘယျလိုဖွဈမှာလဲ။ ဘယျတယောကျက ကြိုးမလဲ၊ ဘယျတယောကျကို ရိုကျမလဲ။ ဒီလိုမြိုး စိတျလေးတှေ ပျေါလာရငျ အခငျြးခငျြး စကားပွောပါ။ အခငျြးခငျြးအားပေးစကားပွောပါ။ ဒါက လမျးပျေါထှကျပွီး ဆန်ဒပွတဲ့ လူငယျတှေ။
ကနြျောတို့အားလုံးမှာ လောလောဆယျတော့ အဖွဘေယျတော့ ရမလဲဆိုတာကို ဘယျသူမှ မသိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့လဲ ဒီလိုမြိုး အားပေးနရေငျနဲ့ အားတတျနရေငျ Motivated ဖွဈနရေငျ ငါတို့ အောငျသှားရငျ ဘာလုပျမယျဆိုတဲ့ အောငျစိတျလေးနဲ့ သူတို့ ရှာဖှပွေီးတော့ ဖတျမယျ၊ ပွုမယျဆိုရငျ ဒီအကွောငျးတှေ ခေါငျးထဲမှာ တခြိနျလုံး ရောကျမနတေော့ဘူး။ နောငျ ငါတို့ရရငျ ဘာလုပျမယျဆိုတဲ့ဟာ အတှေးက ခေါငျးထဲမှာ ဝငျနရေငျ အဲဒီအတှေးလေးနဲ့ အဲဒီမှာ occupy ဖွဈနရေငျ စိတျကိုပွောငျးလဲသှားတယျ။ ဖွဈပကျြနတေဲ့ အနိဋ်ဌာရုံတှကေိုပဲ အမွဲတမျး တှေးမနဘေဲနဲ့ ငါတို့ပွီးသှားရငျ ဘာလုပျမယျဆိုတဲ့ဟာနဲ့ နညျးနညျးလေး switch လုပျရမယျ။ အဲဒါမြိုးလုပျရငျ သူတို့က ပိုပွီးတော့ resilient စိတျခှနျအား ပိုပွီးတော့ ကောငျးလာမယျ။ စိတျကနျြးမာရေးက ပိုပွီးအားပွညျ့လာမယျ။ အဲဒါ အရေးကွီးပါတယျ။
မေး ။ ။ အခုမွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈနတေဲ့ အခွအေနတှေကေို ပွညျတှငျးမှာတငျ မဟုတျဘူး။ နိုငျငံတကာမှာ ရှိနကွေတဲ့ မွနျမာတှကေလညျး တခြိနျလုံး စောငျ့ကွညျ့ပွီးတော့ စိတျပူပနျကွတယျ။ စိတျသောက ရောကျကွတယျ။ အဲဒီလိုမြိုး စိုးရိမျမှုတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှကေို ပွပြေောကျသှားအောငျ၊ လြော့ကသြှားအောငျ ဆရာအနနေဲ့ ဘယျလိုမြိုး အကွံပွုခငျြပါလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါက another good question ပါ။ အဲဒါက ဗမာပွညျတှငျးကော ပွညျပပါ ပွညျတှငျးမှာရော ဘာနဲ့သှားတူသလဲဆိုတော့ အခုဟာက နညျးနညျးလေး Limitation ထားရမယျ။ တခြို့ untrusted sources တှေ၊ တခြို့ပွောကွတဲ့ Psywar လာတဲ့ဟာတှေ၊ အဲဒါမြိုးတှကေ ကိုယျ့ကိုယျ စိတျခွောကျခွားအောငျ၊ စိတျဓါတျပကျြပွားအောငျ ဟိုဘကျက လုပျနတော။ လုပျနတေဲ့ဟာတှကေို မကွညျ့နဲ့။ အခုနပွောတဲ့ Fear Factor ဝငျတဲ့ဟာတှကေို ဖွဈသှားရငျ လူတှကေ မလိုလားအပျတဲ့ စိုးရိမျပူပနျမှုတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှေ ပိုမြားလာမယျ။ အဲဒါက နံပတျတဈ။ နံပတျနှဈကတော့ ပွညျပမှာဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခြိနျနဲ့ ပွညျပအခြိနျက Time Differences က အဲဒါက Main Factor အဓိကလို့ ကနြျောထငျတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အနောကျနိုငျငံတှမှော ညဆိုရငျ ဗမာပွညျမှာက မနကျ။ အကုနျလုံးက သိခငျြတော့ ညမအိပျဘဲ ကွညျ့ကွတယျ။ အားပေးကွတာ ပွညျသူလူထုကို ပွငျပကနေ။ အားပေးကွတော့ နနေဲ့ညတှေ အကုနျမှားကုနျတယျ။ အဲဒါက တဈခကျြ။
နောကျ အစားအသောကျ ပကျြနကွေတယျ။ ကနြျောတို့ကိုယျတိုငျလညျး ခံစားနရေတယျ။ စားသာစားနရေတယျ အရသာက မရှိဘူး။ မပြျောတဲ့စိတျနဲ့ တာဝနျအရသာ တဈခုခု ခန်ဓာကိုယျကွီးကို လုပျပေးနရေတာ ဖွဈနတေော့ ဒါပမေဲ့ အဲဒီစိတျနဲ့ လုပျနရေတာ တာဝနျတဈခုအနနေဲ့ လုပျပါ။ အဲဒီလိုမလုပျဘူးဆိုရငျ ကိုယျထောငျစိတျကွေ ဖွဈသှားလိမျ့မယျ။ အဲဒီတော့ အခြိနျမှနျမှနျအိပျဖို့ ကွိုးစားပါ။ တတျနိုငျသလောကျ မဖွဈနိုငျမှနျးသိပါတယျ။ ကွိုးစားပါ။ ပွီးတော့ အစားအသောကျကိုလညျး အခြိနျမှနျမှနျလေး စားပါ။ ပွီးတော့ Connected လုပျပွီးတော့ မယုံရတဲ့ source တှေ၊ Psywar လုပျနတေဲ့ Post တှကေို မဖတျပါနဲ့။ မလုပျပါနဲ့။ ဒါဆိုလို့ရှိရငျတော့ ပိုပွီးတော့ စိတျကနျြးမာရေးကို ပိုပွီးတော့ ကွံ့ခိုငျအောငျ လုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
မေး ။ ။ အခုလကျရှိမှာ ဆရာလညျး စောစောက ပွောပါတယျ။ စိုးရိမျစိတျတှေ၊ သောကရောကျမှုတှကေ အခုအခွအေနမှောတော့ စိတျရောဂါဖွဈတဲ့အဆငျ့ကို မရောကျသေးဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီအဆငျ့ ဒီအခွအေနတှေကေ ပိုပွီးတော့ ကွာရှညျသှားမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာကိုလညျး ထိခိုကျလာပွီဆိုရငျ ကြှမျးကငျြသူတှနေဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးဖို့ လိုအပျတဲ့ ကုသမှု ယူဖို့အတှကျက ဘယျလောကျအထိ အရေးကွီးလဲ။ ဒါကို ဘယျလောကျအထိ ဂရုစိုကျလုပျသငျ့သလဲဆိုတာကို ဆရာအနနေဲ့ ပွောခငျြပါလဲရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ အဲဒါကတော့ အရေးကွီးတယျ။ အဓိကဖွဈမှာတော့ စိတျကရြောဂါနဲ့ စိတျပူပနျမှုရောဂါ။ တခြိနျလုံး ပူပနျနပွေီးတော့ တဈခုခု မလုပျနိုငျ မကိုငျနိုငျတာတှေ ဖွဈမယျ။ ဘာမှ အဓိက concentration ဘယျအရာကိုမှ အာရုံစူးစိုကျလို့ မရဘူး။ ဘာလုပျလုပျ မပြျောဘူး။ ပြျောတဲ့စိတျလညျး မရှိတော့ဘူး။ ဘာမှလဲ လုပျခငျြကိုငျခငျြစိတျလညျး မရှိတော့ဘူး။ စားခငျြစိတျလညျး မရှိ၊ အိပျခငျြစိတျလညျး မရှိ။ အိပျလညျးမပြျောတော့ဘူး ဆိုရငျတော့ ဒါက စိတျကနျြးမားရေးအတှကျ တိုငျပငျသငျ့ပွီ။ ကြှမျးကငျြသူတှေ၊ ပညာရှငျတှနေဲ့ စကားပွောသငျ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ စိတျကနျြးမာရေးဆိုတာက ရှကျစရာ မဟုတျပါဘူး။ ကနြျောတို့လူမှာ နှဈခုပဲ ရှိတယျ။ ကိုယျနဲ့စိတျ။
ကိုယျကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျတယျ။ နမေကောငျးရငျ ဆရာဝနျပွတယျ။ စိတျကနျြးမာရေးလညျး ဒီအတိုငျးပဲ အခုန ကနြျောပွောတဲ့ လက်ခဏာလေးတှေ ရှိလာရငျ ဆရာဝနျကို ပွပါ။ ပွောပါ။ ဒါက ရှကျစရာ မဟုတျပါဘူး။ စိတျရောဂါဖွဈရငျလဲ ငါတော့ စိတျဒီလိုလေး ဖွဈနတေယျ။ ဘေးနားက ပတျဝနျးကငျြ ပိုပွီးတော့ ပံ့ပိုးပေးလို့ရမယျ။ စကားတှေ ပွောပေးလို့ရတယျ။ ဂရုစိုကျပေးလို့ရတယျ။ ဒါဆိုရငျ စိတျရောဂါက ပွနျပွီးတော့ ကောငျးလာမယျ။ စိတျရောဂါက ဆေးတဈခုတညျးသောကျလို့ ပြောကျတဲ့ရောဂါ မဟုတျဘူး။ သူက ဆေးလညျးသောကျရမယျ။ စိတျဓါတျဆိုငျရာ ကွံ့ခိုငျဖို့လညျး လုပျရမယျ။ ပွီးတော့ ပတျဝနျးကငျြ Social ကလညျး Support လညျး လိုတယျ။ ဒီသုံးခုပေါငျးမှ သုံးကွောငျးထောကျလိုကျမှ စိတျရောဂါက ပွနျပွီးတော့ ထောငျတကျသှားမယျ။ အဲဒီတော့ မရှကျပါနဲ့။ ဖွဈလာရငျ တဈယောကျထဲ ကွိတျပွီးတော့ မခံပါနဲ့။ ကူညီမှုကို ရယူပါ။ ဘေးမှာ ကိုယျ့ရဲ့မိသားစု။ သူငယျခငျြး အသိုငျးအဝိုငျးကို ပွောပွီးတော့ ပံ့ပိုးမှုကို ရယူပါ။
မိသားစု၊ သူငယျခငျြး အသိုငျးအဝိုငျးကလညျး အဲဒီလိုမြိုးဆိုရငျ မနောကျပါနဲ့။ မပွောငျပါနဲ့။ ဒါတှကေ နောကျစရာ ပွောငျစရာ မဟုတျဘူး။ သူတို့က တကယျ့ခံစားနရေတာဆိုတော့ အားပေးပါ။ Support လုပျပေးပါ။ ဒီလိုမြိုး လုပျပေးလိုကျလို့ရှိရငျ အခုန စိတျရောဂါကလညျး ပွနျပွီးတော့ နောကျတဆငျ့ ပွနျကောငျးသှားပွီးတော့ ပုံမှနျပွညျသူလူထုထဲမှာ တတပျတအား ပွနျဖွဈသှားမယျ့ဟာ ဖွဈသှားမယျ။ ကနြျောကတော့ အဲဒီလိုမြိုးပဲ အကွံပွုခငျြပါတယျ။
မစုမွတျမှနျ ။ ။ အခုလိုမြိုး အခြိနျပေးပွီးတော့ ဖွကွေားပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျရှငျ့။
ဖွေ ။ ။ အခုလိုမြိုး ပွောခှငျ့ရတဲ့အတှကျလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။